» कमेडी च्याम्पियनबाट सुमन बाहिरिदा निर्णायकहरु नै चकित
कमेडी च्याम्पियनबाट सुमन बाहिरिदा निर्णायकहरु नै चकित
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार १२:२४
मकवानपुर, ७ फागुन । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को उत्कृष्ट ५ मा पर्न सफल प्रतियोगी सुमन कार्की शोबाट बाहिरिएपछि निर्णायककहरु समेत चकित बनेका छन् । शोको अन्तिम चरणहरु चलिरहँदा सुमन थप चर्चामा थिए । शोमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै चर्चित बनिसकेका सुमनको हरेक प्रस्तुतिमा दमदार प्रस्तुति रहने गरेको थिए । तर दर्शक भोटको कारण उनी बाहिरिएपछि शोका निर्णायकहरुले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ५ मा पर्न सफल सुमन कार्की भोटिङका आधारमा बाहिरिएसँगै शोका निर्णायक सन्तोष पन्तसहितको टोलीले कार्यक्रममा नै अचम्म लागेको बताएका थिए । उनी फाईनलसम्मै पुग्ने अपेक्षामा आफुहरु रहेको भन्दै निर्णायकहरुले समेत नसोचेको भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । निर्णायक सन्तोष पन्तले सबैभन्दा चकित भएको र नराम्रो लागेको बताए । शोका अन्य निर्णायकहरुले पनि सुमन आउट हुनु शोको लागि पनि घाटा भएको भन्दै उनी स्टार भइसकेको बताए ।
मोरङ निवासी सुमन कार्की सबैलाई हँसाउन सफल भएका थिए । उनी एकपटक पर्फोमर अफ द राउण्ड समेत घोषित भएका थिए । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।